Maka tahaka an'i Apple ve i Microsoft? | Vaovao IPhone
Aorian'ny fampisehoana ny Windows 10 handeha hamakafaka ireo torolàlana vaovao arahin'i Microsoft izahay, lalana iray tena hafa noho ilay narahiny hatramin'ny nanombohany, ary koa ny fitoviana sy ny tsy fitovizany amin'ny politikan'ny fampandrosoana an'i Apple, manomboka amin'ny fampiraisana ka hatramin'ny rafitra fanaraha-maso ny feo toa an'i Cortana.
1 Fanavaozana maimaimpoana
2 Ny fivavahana amin'ny Windows
3 Mitantana mailaka amin'ny fihetsika
4 Skype no iMessages vaovao
5 Fandefasana mangirifiry amin'ny fampisehoana
6 Tsy ny rehetra no ho kopia, i Microsoft koa mahalala ny fomba hahagaga antsika
7 Nahazo azy ireo aloha
Ny iray amin'ireo vaovao mifandraika indrindra aorian'ny fampisehoana ny Windows 10 dia maimaim-poana izany. Rafitra miasa Microsoft maimaim-poana? Saika, fa amin'ny fitsipika eny. Avelan'i Microsoft maimaim-poana tanteraka ny fanavaozana ho an'ny taona voalohany ho an'ireo mpampiasa Windows 7 sy 8.1. Araka ny efa fantatsika, Apple dia nanolotra fanavaozana maimaimpoana ho an'ny Mac OS X nandritra ny taona maro, ka toa tsy azo ihodivirana ny orinasa Redmond hanomboka "hanome" ny rindrambaiko tahaka ny ataony amin'ny Mac sy Android.
Ny fanavaozana ny kinova smartphone an'ny Office hanafahana azy ireo no dingana voalohany tamin'io lalana io.
Ny fivavahana amin'ny Windows
Aza manao hadisoana, ny ankamaroan'ny vola miditra, ny doka ary ny fampandrosoana dia ny fanboys sy mpampiasa mahazatra. Nanambara izy ireo fa te-hampitia ny olona ho tia Windows isan'andro isan'andro. Microsoft, tsy isalasalana, dia maka ny ohatr'i Apple amin'ireo lafiny ireo, azo jerena ao amin'ny ny fanamboarana ny vokatrao, izay namboarina tsara sy manokana. Na ny famelabelaran-kevitr'i Nadella aza dia afaka nitovy tamin'ny fitsabahan'ny manokana nataon'i Steve isaky ny fampisehoana, nandehandeha toy ny guru tia ny teknolojia ary manome antsika "vokatra tsy mampino" izay hanova ny fiainantsika.
Tsy izy ireo no voalohany nijery ireo fampisehoana nataon'ny Apple nanolotra ny vokatr'izy ireo, hitantsika koa io kolontsaina fampisehoana io tamin'ny fampisehoana Samsung sasany ary mazava ho azy, ilay Xiaomi mampiady hevitra.
Mitantana mailaka amin'ny fihetsika
Ireo mpampiasa Windows 10 ho avy dia ho afaka hametraka lamina haingana sy mora amin'ny boaty mailaka, nampiana rafitra rindrambaiko mailaka i Microsoft fitantanana amin'ny fihetsika tena mitovy amin'ilay nampidirin'i Apple ao amin'ny iOS 8, mamela anao hamafa haingana, hitahiry na hametaka amin'ny boaty fampidiranao.
Noraisiny ara-bakiteny avy tany amin'i Apple ny fihetsika mihodina mankany ankavia hanaisotra mailaka, na i Joe Belfiore aza tsy niraharaha an'io fitoviana io, satria hoy izy nandritra ny fisehoana fa io fihetsika io dia mety ho fantatry ny ankamaroan'ny mpanatrika.
Skype no iMessages vaovao
Skype dia ho an'ny antso an-tsary, izany no kolontsaina miely patrana. Na dia izany aza, Windows dia te hamadika ny Skype ho lasa iMessages vaovao miaraka amin'ny fahatongavan'i Windows 10. Ny fanovana farany dia mifantoka amin'ny fandefasan-kafatra, toy ny efa ataon'ny iMessages, rehefa manandrana mandefa hafatra an-tsoratra ho hitan'ny rafitra avy hatrany rehefa manana kaonty Skype ny mpandray ho avy ary mandefa hafatra an-tsoratra amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny Skype. Tsy isalasalana fa io no iray amin'ireo "fitoviana" manjelanjelatra indrindra amin'ny rindrambaiko Apple.
Fandefasana mangirifiry amin'ny fampisehoana
Rehefa namoaka ilay milina fanaovana kopia izahay dia nanandrana naka tahaka ny tsara ihany, saingy toa lasa lavitra kokoa i Microsoft tamin'ity indray mitoraka ity. Ny teboka mahatsikaiky ny fitoviana dia miaraka amin'ny streaming mahatsiravina amin'ny famelabelarana izay nataon'i Microsoft, amin'ny haavo Apple ihany. Asa sarotra ny afaka mahita tsy misy fanelingelenana mihoatra ny roa minitra fampisehoana, mampino fa ny iray amin'ireo orinasam-solosaina lehibe indrindra eto an-tany ary tompon'ny Skype mihitsy no manao streaming mampalahelo toy izany.
Tsy ny rehetra no ho kopia, i Microsoft koa mahalala ny fomba hahagaga antsika
Betsaka ny voalaza momba ny fahitalavitra Apple, tsia tsia, efa tonga i Microsoft talohan'izay. Ny orinasa Redmond dia nanolotra Microsoft Surface Hub, fahitalavitra 84-inch Miaraka amin'ny fehin-kevitra 4K izay takelaka goavambe dia manana fakantsary roa, mikrô, WiFi, Bluetooth… Raha fintinina, betsaka lavitra noho ny fahitalavitra. Ankoatr'izay dia hanana kinova 55-inch izy io, saingy tsy maintsy tadidintsika fa ity fitaovana ity dia hifantoka bebe kokoa amin'ny orinasa noho ny tontolon'ny fianakaviana.
Cortana ho an'ny birao, ity kinova an'ny Cortana dia hamoaka ireo loko ao Siri. Ny fanavaozana vaovao, ankoatry ny fampifanarahana feno amin'ny solo-sainanao manokana, dia hitondra fiasa vaovao marobe izay hahatonga ny resadresaka amin'ny feon-kevitr'i Microsoft hiresaka sy hiresaka kokoa.
Ary farany, zavatra tsy nantenain'ny olona ho hita intsony amin'ny Keynote androany, fitaovana iray nantsoina Holo Lens, solomaso mifangaro eo anelanelan'ny Google Glass sy Oculus Rift. Na dia mbola tsy fantatra firy aza ny momba azy ireo dia azo antoka fa hampandrenesina ireo voalaza etsy aloha.
Nahazo azy ireo aloha
Raha efa naminavina ny fampifangaroana na fampidirana eo amin'ny iOS sy Mac OS ny mpampiasa Apple, Microsoft kosa no voalohany. Windows 10 dia ho rafitra manerantany izay toa tsara ho an'ny PC sy ny takelaka ary ny finday avo lenta, ny fahaizana manova haingana ny hybrid PC-Tablet amin'ny fitaovana iray ao anatin'ny segondra, noho ny Continuum no mampiavaka azy manokana. Na eo aza izany dia mbola lavitra ny lalan'ny Microsoft raha ny momba ny rindranasa, fa izao dia manana ny toerany i Apple amin'izany lafiny izany.
Toa nanasazy i Microsoft taorian'ny tsy fahombiazan'ny Windows 8 ary azo antoka fa noraisin'izy ireo tamim-pahamatorana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Maka tahaka an'i Apple ve i Microsoft?
trillian dia hoy izy:
Efa lasa applefanboy ianao, mamporisika anao aho mba tsy homba ny atsy na ny aroa.
Mamaly an'i trillian
designwebrivieramaya dia hoy izy:
naoty tena tsara sy fandinihana ny "fitoviana" amin'ny rafitra manohitra ny an'i cupertino, na izany aza ary tsara ny fanamarihanao azy, izy ireo no voalohany, ratsy noho ny tsara, mandika na tsy mandika, nanao dingana voalohany izy ireo hahitan'ny mpampiasa ilay fahafaha-manao vaovao Windows 10, araka ny hevitro dia miarahaba an'i Microsoft aho noho izy niditra an-tsaha izay tamin'ny taona lasa dia tsy te hiditra izy, etsy ankilany, fanintonana ny tanana ho an'i Apple, efa akaiky ny tsy fahombiazany raha tsy mamerina ny traikefa amin'ny vokatra sy ny endriny, ary koa ny fampiasa eo amin'izao tontolo izao eo amin'ireo vokariny. volana vitsivitsy miala amin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny famantaranandro paoma isika, zavatra iray izay tena mbola tsy vokatra "fitohizan'ny" Apple fianakaviana.
Apple, iza no hisolo ny toeranao?
Mamaly an'i designwebrivieramaya
Faly aho fa tianao io ary hitanao fa azonao ny fomba fijery rehetra. Eny tokoa, araka ny nolazaiko tao amin'ilay lahatsoratra, ny maha-universal ny OS izay napetrak'i Microsoft ho mpisava lalana dia manohana an'i Apple.
iPhorocar dia hoy izy:
Lahatsoratra mahafinaritra ary tsara ny firakofana.
Valiny amin'ny iPhorocoches
Alexis dia hoy izy:
Tsy nety taminao ny ony Microsoft? Oay! Ary satria tokony hanana vokatra paoma eny an-tànana ianao ary tsy tokony hofongorana ny tamba-jotra tsara.
Azoko jerena tsy misy tsy fahombiazana na tapaka miaraka amin'ny hafainganam-pandeha Lumia 520 sy 2 Mb.
Valiny tamin'i Alexis
Miezaka ny milaza ny marina foana amin'ny vaovao izahay, nametraka horonan-tsary marobe avy amin'ny loharanom-baovao hafa ahafahanao mankasitraka ireo fanapahana ireo:
- https://www.youtube.com/watch?v=rLcYwjmWnWg - Min.47: 25, 27: 53 ... sns satria ny mpiara-miasa amin'ny WindowsInsider dia maneho hevitra fa ratsy ny fandehan'ny streaming.
Ohatra iray fotsiny io. Na izany aza, faly aho fa afaka nankafy Keynote.
René dia hoy izy:
Ny fanahin'i Steve Jobs dia ao Redmond. Hehe… Handeha amin'ny Windows izao i Dare.
Valio i René
tsy mila aho dia hoy izy:
Hitako tsy nisy nanapaka tamin'ny VLC izany.
Mamaly an'i nokiero
Ramirez Manuel dia hoy izy:
Izay lahatsoratra maharikoriko indrindra ajajajaj go Fanboy.
Valiny tamin'i Ramirez Manuel
dfsd dia hoy izy:
Apple, mandeha rà ianao noho ny ratra !! Ny taranaka Apple dia efa ho faty, ny endrika minimalista izay mankaleo foana miaraka amin'ilay zavatra mitovy dia efa lany andro, ratsy tokoa ny tsy fiheveran'ny olona fa mandresy ny sasany ary ny sasany kosa resinao. Toa ny hany zavatra nisy teto amin'izao tontolo izao dia ny paoma sy google, amin'ny lafiny iray ny zazalahy geek ary amin'ny lafiny iray ny ankizy mpiorina amin'ny Internet dia andao tsy hiresaka momba ny Facebook satria na be aza ny zavatra tadiaviny dia tsy izy ireo orinasa teknolojia, izay afaka mitondra asa vao vita toa ireo telo ireo. Jereo ny fomba nahaizan'i Microsoft nandika ary mety nihatsara. Ny tiana holazaina eto dia ny hoe ny fandrosoana lehibe izay nahatongavan'i Apple sy Google niaraka tamin'ny efijery, takelaka ary finday dia mampihomehy tanteraka amin'ny zavatra natolotr'i Microsoft tamin'ny solomaso Holo. Google dia efa nanana ny nahatongavany ary izany no antony nanambazany vola tamin'ny google vera izay tsy fahombiazana izay tsy inona fa ny fampifanarahana ny android amin'ny lantira sasany fa tsy zavatra hafa ankoatry ny fampidirana ny finday ao amin'ilay fitaovana voalaza. Etsy ankilany Apple dia variana tamina vola be izay nampanaovin'ny iPhone azy ireo, tamin'ny fomba izay niheveran'izy ireo fa tsy misy zavatra tsara kokoa noho izy ireo nahatratra ny fetran'ny famoronana olombelona. Mandritra izany fotoana izany, IBM sy Microsoft, ireo antitra eo amin'ny sehatry ny indostria dia nanohy nanambola tamin'ny haitao farany rehefa nirodana ny indostria PC. Tadidiko ireo horonantsary tamin'ny taona 2000 izay efa niniana mialoha daholo ireo fitaovana ireo, tsy misy vaovao na iray aza, na ireo takelaka aza, dia tsy vaovao izany.
Valio i dfsd
Eny, maratra mafy i Apple ... iPhones 75 tapitrisa amidy ao anatin'ny telo volana, ny tombony be indrindra azon'ny orinasa rehetra teo amin'ny tantara nandritra ny telovolana ... Nametra-pialana izao i Tim Cook !!!!
Shades, ny fampiharana amin'ny herinandro ao amin'ny App Store
Azonao atao ve ny misoroka ny fisolokiana amin'ny eBay momba ny prototypes an'ny Apple?